Shiinaha Gawaarida Gaaban Buugga Jelly Glue Warshad iyo alaableyda | Gelken
Ku dhalaali kulul xabagta jelly ayaa loo yaqaan xabagta borotiinka. Qaybta ugu weyn waa gelatin. Kuma jiraan maadooyinka loo yaqaan 'benzene formaldehyde solvents', mana u horseedi doonto faddaraynta cuntada iyo alaabada la soo baakadeeyay.
Xawaaraha qalajinta ee noocan ah qariya xabagta waa gaabis, dushiisuna waa xabagta warqadda ah. Xabagta waa dheg dheg, mana noqon doonto mid lagu sii adkeeyo waqtiga furitaanka dheer. Tani waxay u oggolaaneysaa waqti ku filan buug-gacmeedka dhameystirto wax soo saarkeeda.
Waxaa jira waxyaabo yar oo ay tahay inaan fiiro gaar ah u yeelano markaan isticmaaleyno
1. Koolada jeligu waa samaynta biyo ku saleysan. Markaad isticmaaleyso, waa inaan isku hagaajinno nafwaayaha iyo isku-uruurinta adigoon biyo ku darin. Nafaqada waa in lagu hagaajiyaa qaddar yar iyo marar badan illaa ay ka habboon tahay. Ku darista biyo aad u badan ma aha mid dheg dheg ah.
2. Xabagta waxaa loo isticmaalaa 50-65C, waxaa loola jeedaa heerkulka xabagta halkii laga isticmaali lahaa heerkulka aaladda kululaynta.Waxaa jira qalad ku jira heerkulka dhabta ah, heerkulbeegga meerkuriga ama meerkuriga ayaa loo baahan yahay si loo cabbiro heerkulka xabagta si joogta ah Heerkulka mashiinka badanaa 15 -20 digrii Celsius ayuu ka sareeyaa heerkulka xabagta.
3. Qiyaasta cabirka ma sii fiicnaanayo. Waxay kuxirantahay warqada iyo kartoonka. Cabirka macquulka ah waa inuu awoodaa inuu si adag isuguxiro.
4. Xabagta xayawaanka way ka duwan tahay xabagta kiimikada. Haddii warqadda la isku dhejiyay ay saliid badan tahay ama caag ka badan tahay, laguma dhajin doono ficil ahaan. Haddii ay u baahan tahay in si fiican loo dhejiyo, waad beddeli kartaa. Qaybaha isku xidhan waxaa lagu daaweeyaa corona si loo baabi'iyo lakabyada saliidda iyo caagga ah, si ay si fiican ugu xirnaadaan.
5. Samee muunad ka hor intaadan isticmaalin xabagta jelly si aad u hubiso in badeecadaadu ay ku habboon tahay ku xirnaanta xabagta jelka ah (xabagta xayawaanka), haddii kale, waa inaad doorataa xabagta kale ee ku habboon.
Hore: Dhexdhexaad Xawaaraha Jelly Xabagta
Xiga: Lafaha Dambaska